Jwxo-shiil, oo Khilaaf Dhex Dhigay Mulkiilayaasha Shirkad ka Ganacsata Xawaalada – Rasaasa News
Jwxo-shiil, oo Khilaaf Dhex Dhigay Mulkiilayaasha Shirkad ka Ganacsata Xawaalada
Apr 23, 2010 Jwxo-shiil, Kenya
Khilaafkii siyaasadeed ee ka dhex bilowday ururka ONLF, oo gacan ka hadal iyo dilal ka tagay, haatana dacalka ku dhagan dhaqaalihii iyo wada ganacsigii ka dhaxeeya ganacsatada ku shirkoobay xawaalada KAAH.
Marka aan dib ugu noqono dhawr sano ka hore, waxaa uu khilaaf xoogan ka dhex jiray gudaha ururka Onlf kaliya, waxaana in badan laga baryey Jwxo-shiil in uu wax ka qabto khilaafka ururka dhexdiisa ah, maadaama uu isagu xiligaas madax ka ahaa, ahaana ninka ugu duqsan.
Markii ururka dhexdiisu ay is xalin waayeen, ayaa lagama maarmaan ay noqotay in dadweynaha qurbo joogta ah oo ka mid ah xaqlayaasha halganka ay odayaal u diraan in ay dhex galaan khilaafka ururka, Jwxo-shiil, ayaana arintaas qaab beeleed u rogay, kolkii uu si gaar ah ula tashaday odayaal beeshiis ah.
Jwxo-shiil, oo si sharci daro ah ku dhex galay halganka ay waday ONLF ayaa jeclaystay in sharci daro ugu ahaado madax, waxaana yimid kala qaybsanaan.
Jwxo-shiil ayaa isagu hore uga tabtaystay, hadii ay dad ka soo horjeedsadaan hogaankiisa waxaana uu iska adkeeyey dhincyada dhaqaalaha iyo taakulaynta dhinaca ciidanka. Dhaqaalaha waxaa uu si wayn u dhex galay shirkada xawaalada ee KAAH oo uu wakiil uga yahay Mustafe Cali, oo daano wayn gaadhsiiyey shirkada, dhinaca ciidankana Eritrea ayaa majaraha u haysa.
Dhibaatada uu mustafe dhex galiyey shirkada Kaah, ayaa in badan oo macaamiishada ahayd daaha ka rogteen, sababtuna waxay ahayd mustafe oo si miidaan daro ah oo ay qabyaaladi ku jirto u dhex galiyey kooxda Jwxo-shiil.
Shirkada, oo sanadkiiba hal mar xisaab xidh samaysa ayey sanadkan ka dhex taagan tahay xisaab xumo weyn iyo wax is daba maris uu masuul ka yahay Mustafe. Waxayna u egg tahay in mustafe iyo cidii la socotay ay haatan diyaar u yihiin in ay ka go,aan shirkada, waxayna u egg tahay in ay horeba isu meeleeyeen oo ay samaysteen shirkad lagu magacaabo TARAN.
Waxaan idinla socod siin doonaa, kolba wixii ka soo kordha, waxaanan filaynaa in shirkada magaceedu uu kor u soo kici doono, ka dib kolka uu dhaafo Mustafe.